Fantatrao ve hoe inona no sehatra ara-dizitaly?
Izany no fanontaniana mety. Inona ny SEO amin'ny Digital Marketing (DM)? Raha ny marina, ny Search Engine Optimization (SEO) dia tsy miasa irery ho an'ny tenany manokana. Ary mino aho fa ny fananana fahatakarana lalindalina kokoa momba ity olana ity dia hanampy anao hampitombo ny fahaizanao mamaritra ny laharam-pahamehana.
Alohan'ny zavatra hafa, ny anjaran'ny liona avy amin'ny manam-pahaizana momba ny SEO na ny mpizaha programa dia efa nandray anjara tamin'ny web dev, na ny sisa tamin'ny fandalinana informatika. Raha izaho, tsy nampiofana ahy ho mpandraharaha ara-barotra, noho izany dia tsy azoko mihitsy ny SEO amin'ny Digital Marketing. Mazava ho azy fa ny tanjona voalohany amin'ny fanatsarana ny fikarohana dia ny hahazoana ny laharana ambony ao amin'ny SERP - laminate table.
Saingy mbola sarobidy loatra amin'ny fomba amam-panao ara-barotra tany am-boalohany, fa ny fifandraisany amin'ny SEO dia matetika tsy miraharaha ny ankamaroantsika. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny fitaovam-pikarohana (toa an'i Google ihany) dia te-hamela ny olona hihaona amin'ny vokatra tsara indrindra, noho izany dia mety ny fahafaham-po amin'ny mpampiasa ao anaty aterineto sy ny fanoloran-tena no tena matanjaka indrindra eo amin'ny SEO, fa tsy tadidintsika taloha. Izany no mahatonga ahy mino fa lasa sehatra iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena i SEO. Midika izany fa ny marketing ara-barotra miara-miasa miaraka amin'ny SEO tsara dia ny hany fomba hahazoana mari-pivoarana ambony kokoa ary ankafizo ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Noho izany, inona no SEO amin'ny sehatra nomerika, mba ho marina? Mba hahazoana fidiram-bola ambony amin'ny orinasa an-tserasera amin'ny 2017, tokony hanao SEO manokana ianao, manao toy ny mpandraharaha manana traikefa amin'ny fotoana iray ihany. Eto ambany eto, ndeha hifanakalozantsika ny modely maoderina indrindra mampifandray ny SEO sy ny hevitra sasany momba ny marketing ara-barotra. Noho izany, andeha hojerentsika ny Digital Marketing mifandray amin'ny Search Engine Optimization.
Hitanay ireo efamira efatra lehibe amin'ny marketing ara-tsarimika izay nahazo ny fifandraisana akaiky amin'ny Search Engine Optimization. Araka ny famaritana voalohany, ny marketing dia mametraka fotsiny ny vokatra na serivisy mety amin'ny mpihaino tsena, amin'ny fotoana mahamety azy ary amin'ny vidiny tsara. Andao haka fotsiny zavatra sarotra nefa tsy misy ilàna azy indray mandeha. Ny tiako lazaina, misy ny sehatra manan-danja efatra amin'ny Digital Marketing: vokatra, vidiny, toerana, ary fampiroboroboana.
Raha ny marina, ny zavatra ilaintsika rehetra dia ny mametraka ireo rehetra ireo. Andao hiatrika izany - betsaka ny zavatra tokony hatao ao anatin'ny fahaiza-manaon'ny Digital Marketing indrindra. Afaka mahatsapa maimaim-poana ny manamboatra ny zavatra rehetra amin'ny vokatra, ny vidiny, ny fizarana, ary ny fampiroboroboana mety amin'ny lamina rehetra. Ny tiako holazaina dia tsy misy hevi-dàlana mijery ireo singa hafa, raha mbola avo loatra ny vidin'ny vokatrao, ohatra.
Mba hahitana fahombiazana ara-barotra lehibe, dia mila alam-barotra eo amin'ny tsenan'ny orinasa miasa ianao, mifandraika amin'ny habetsahan'ny fifaninanana. Ary ny zava-drehetra dia afaka manaporofo fa tena tsotra raha mandinika ny fahombiazan'ny SEO ianao - amin'ny habetsahan'ny fifampiresahana azonao mivantana avy amin'ny fifamoivoizana organika. Amin'izany fomba izany, afaka manatsara ny drafitra SEO ankapobeny amin'ny fijerena ny vidin'ny vokatrao ianao. Ataovy toy izany koa ny fomba fiasa sy ny dingan'ny fampiroboroboana.